Teknolojia an-tserasera an-tserasera amin'ny filokana amin'ny fanatanjahantena - Forums FiestaCubana.net
Teknolojia an-tserasera an-tserasera amin'ny filokana amin'ny fanatanjahantena
Message par yortsreying8899 » mar. févr. 11, 2020 11:33 am
Inona no manao filokana amin'ny fifaninanana?
Ny fametrahana filokana ara-panatanjahantena dia mora. Tranon-tserasera Raha toa ka mandresy ny ekipa na ny atleta dia hahazo vola ianao. Raha resy izy ireo dia very vola. Tsotra ihany, tsy sarotra. Misy ihany koa ny fomba filokana isan-karazany izay malaza amin'ny fanjakana anglisy. Voalaza fa mitentina 3 lavitrisa dolara isan-taona ny tsenan'ny filokana an'izao tontolo izao.Gclub4laos.com
Vidiny tsara sy ratsy
Ny voka-tsoa sy lafy ratsin-javatra no tsy fahita firy amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena amin'ny Internet an-tserasera, ka ireo ekipa na mpilalao tsara kokoa dia tsy hifaninana be loatra. Ohatra, ao amin'ny ekipan'ny football amerikanina malaza NFL, dia mandoa vola 3 i Dallas rehefa miatrika underdog toa an'i Miami ao amin'ny +3, izay midika fa tokony nandresy an'i Miami bebe kokoa i Dallas. Isa 3, ka hahazo vola amin'ny lalao Dallas ianao. Amin'ny fanatanjahantena malaza toy ny baolina kitra dia tsy hafa izany. Raha mandoka amin'i Chelsea amin'ny vidin'ny -2,5 ianao dia tsy maintsy avelanao hahatratra tanjona 3. Raha tsy izany dia ho very vola ianao.
Ny lozisialy an-tserasera amin'ny roulette karama dia tratran'ny ekipa na mpilalao izay heverina fa handresy. Raha ny tokony ho izy dia manisa ny tahan'ny fandoavam-bola ho an'ny filokana.Raha ohatra dia mihinana amin'ny baolina amerikanina NFL izay handresena i Baltimore amin'ny varotra amin'ny -200. Midika izany fa tsy maintsy milatsaka 200 ianao hahazoana 100, fa raha toa ka mametraka ekipa faharoa, toa an'i San Diego ihany koa. Vidiny 180. Izany no lafiny fandresena.Mahazo vola 180 ianao amin'ny fametrahana peratra 100.
Vidiny avo / ambany
Over / Under dia fidinana iray mifototra amin'ny isa. Ohatra, ny lalao baolina kitra amerikanina eo anelanelan'ny New Orleans sy Texas dia manana vidiny 48 / avo lenta, raha toa ianao ka mametraka filokana avo dia tsy maintsy mahazo ny isa mitambatra miampy teboka 48.5. mihoatra ny 48,5 no hataonao. Ny mitovy amin'ny fanatanjahantena rehetra
Ahoana ny fametrahana boka?
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ho an'ny fanatanjahantena, ekipa na mpilalao te hahafinaritra. Avy eo misafidy ny hametraka tarehimarika mifangaro amin'ny odds isan-karazany, miampy / minus, avo / ambany ary azo antoka Sahala amin'izany, tsy sarotra ny famitana ny dingana. Miandry tanteraka ny fanantenan'ny fifaninanana izay ho araka ny fanirianao ianao